Tag: fironana | Martech Zone
Alatsinainy Desambra 7, 2020 Alatsinainy Desambra 7, 2020 Jeroen Van Glabbeek
Ny traikefan'ny mpanjifa nohatsaraina dia nanjary tsy azo ifampiraharahana ho an'ireo orinasa te hisarika sy hitazona ny mpanjifa. Rehefa manohy miroso amin'ny sehatra nomerika izao tontolo izao, ny fantsom-pifandraisana vaovao sy ireo sehatra angon-drakitra mandroso dia namorona fotoana ahafahan'ny fikambanana manatsara ny traikefan'ny mpanjifany sy mizatra amin'ny fomba fanaovana asa vaovao. Herintaona feno fikorontanana ny 2020, saingy io ihany koa no nahatonga ny orinasa maro hanomboka handray ny nomerika amin'ny farany - na
Alakamisy, May 7, 2020 Wednesday, May 6, 2020 Christina Lyon
Tsy takona afenina fa ny fironana ara-barotra dia mipoitra miaraka amin'ny fanovana sy fanavaozana ny teknolojia. Raha tianao hisongadina ny orinasanao dia mitondrà mpanjifa vaovao ary ampitomboy ny fahitana an-tserasera dia mila mavitrika amin'ny fanovana teknolojia ianao. Mieritrereta fironana teknolojia amin'ny fomba roa (ary ny fomba fisainanao no hampisy fahasamihafana eo amin'ny fampielezan-kevitra mahomby sy kalikety ao amin'ny analytics): Na manaova dingana hianarana ny fironana ary hampiharana azy ireo, na hijanona eo aorianao. Amin'ity
Antontan'isa momba ny fikarohana voajanahary ho an'ny taona 2018: Tantara SEO, Indostria ary fironana
Zoma, Jona 22, 2018 Zoma, Jona 22, 2018 Harsha Kiran
Search engine optimization dia dingan'ny fiatraikan'ny fahitana an-tserasera amin'ny tranokala na pejin-tranonkala amin'ny valiny tsy voaloa amin'ny motera fikarohana, antsoina hoe valiny voajanahary, voajanahary, na nahazo. Andao jerena ny fizotry ny motera fikarohana. 1994 - Navoaka ny milina fikarohana voalohany. Ny Ask.com dia nanomboka ny laharam-pahamehan'ny rohy. 1995 - Msn.com, Yandex.ru, ary Google.com no natomboka. 2000 - Baidu, motera fikarohana sinoa no natomboka.